कसले हात पार्ला 'बिग बोस-१४' को ट्रफी?
मुकेश कुमार गजेन्द्र आइतबार, फागुन ९, २०७७, २१:०७
तपाईं मन पराउनुस् या नपराउनुस्, तर 'बिग बोस'लाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। भारतका सबैभन्दा विवादित तर सबैभन्दा ठूलो रियालिटी सो हो बिग बोस। यसका प्रस्तोता बलिउडका सुपरस्टार सलमान खान हुन्। त्यसैले पनि यसको चर्चा नगरिरहन गाह्रो छ।
२१ फेब्रुअरी अर्थात् आइतबार बिग बोसको 'ग्रान्ड फिनाले' हुँदैछ। यो सिजनको बिजेता को बन्ला भन्नेबारे फ्यानहरू बेचैन प्रतीक्षामा छन्। बिगबोसको घरमा बाँकी रहेका रुबीना दिलाइक, राहुल वैद्य, निक्की तम्बोली, अली गोनी र राखी सावन्तका बीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देख्न सकिन्छ।
तर साँच्चै भन्ने हो भने रुबीना र राहुलको बिचमा भने घम्साघम्सी नै छ। सामाजिक सञ्जालमा भएका कयौं सर्वेक्षणमा रुबीना र राहुलमध्ये एकले बिग बोसको ट्रफी हात पार्ने आँकलन गरिएको छ।
बिग बोसका प्रतियोगी रुबीना, राहुल र अभिनव
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका धारणाहरू हेर्ने हो भने रुबीना दलाइक र राहुल वैद्यको कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। भोटिङको मत प्रतिशतका आधार हेर्ने हो भने रुबीना भारी पर्न सक्छिन्। तर गत शुक्रबारको 'एपिसोड'पछि भने स्थिति परिवर्तन भइरहेको छ।
भोटिङ प्रतिशतका आधारमा राम्रो स्थानमा भएपनि भोटिङ सेयरमा उनी पछाडि देखिएकी थिइन्। उक्त भोटिङ सेयर राहुलको खातामा ट्रान्सफर भइरहेको छ। जसले गर्दा राहुल बिग बोस १४ को बलियो प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। उनलाई जुन गतिमा भोट मिलिरहेको छ, यो देख्दा रुबीनाभन्दा राहुल अगाडि छन्। अली गोनीलाई पनि दर्शकको माया मिलिरहेको छ। तर भोटिङ सेयर निकै कम छ। उनी पछि निक्की अर्थात् राखी सावन्त छिन्। जसलाई निकै कम भोट मिलिरहेको छ।
सर्वेक्षणका आधारमा रुबीना अगाडि
भारतकै एक टेलिभिजनले गरेको सर्वेक्षणअनुसार रुबीना दिलाइक बिग बोस १४ को बिजेता बन्न सक्छिन्। सर्वेक्षणअनुसार ६१ प्रतिशतले रुबीनाका लागि भोट दिएका छन्। त्यस्तै राहुलका लागि २४ प्रतिशत, अलीका लागि १० प्रतिशत भोट दिएका छन्। निक्की तम्बोलीका लागि भने जम्मा ३ प्रतिशत भोट मात्रै मिलेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा लडाईं
त्यसो त राहुललाई कमजोर मान्न सकिँदैन। यस्तो मानिन्छ कि, राहुल र रुबीना नै आखिरमा दुई प्रतिस्पर्धी बन्नेछन्। यिनै दुई जनामध्ये एकजनालाई विजेता घोषणा गरिनेछ।
पछिल्लो दिनमा टिकटदेखि फिनालेको दौडमा दुईबीच गज्जबको टक्कर भएको थियो।
रुबीनाको टास्क सञ्चालक पारस छावडाले जिताए। यसबाट रिसाएर राहुलका शुभचिन्तकले ट्विटरमा 'ह्यासट्याग राहुल डे फर द विन' नै चलाए। यसको जवाफमा रुबीनाका शुभचिन्तकले 'ह्यासट्याग रुबीना फर द विन' चलाए। अहिले भने ह्यासट्याग 'अबकी बार रुबीना दिलाइका' ट्विटर ट्रेन्डिङमा छ।
के छ राहुलको खास कुरो?
राहुल वैद्यलाई परिचयको खाँचो छैन। उनी इन्डियन आइडलको पहिलो सिजनमा फाइनलिस्ट छन्। भारत तथा भारत आसपासका देशमा उनका फ्यान फलोइङ प्रशस्तै छन्। अहिले बिगबोसमा आएपछि झनै उनलाई मन पराउनेको संख्या बढेको छ।
अरु प्रतियोगीभन्दा फरक देखिनुको कारणमा उनको इमान्दारी र बफादारी पनि आउँछ। यसका साथै उनी गायकीमा पनि उतिकै चाख राख्छिन्। यसले बिग बोसको घरको माहोल संगीतमय बन्छ।
यति मात्रै होइन, राहुल कमालका मनोरञ्जक पनि हुन्। एकातिर लडाई भइरहेको हुन्छ भने अर्कातिर उनि बिभिन्न पन्चिङ लाइन मार्फत हाँस्न विवश बनाउँछन्। उनी बिगबोसका निष्पक्ष खेलाडी हुन्।
के छ रुबीनाको खास?
भारतीय टेलिभिजनको सिरियल छोटी बहु र शक्तिको माध्यमबाट दर्शकको मनमुटुमा बस्न सफल कलाकार रुबीनाले उनका पति अभिनव शुक्लाका साथ बिग बोसमा प्रवेश गरेकी हुन्। यो जोडी निकै चर्चित पनि छ।
राखी सावन्तसँग भएको झगडाको कारण पनि रुबीनाको कुरा चलिरहन्छन्। अभिनव शुक्ला सोबाट बाहिर निस्केपछि उनी झनै बलियो प्रतियोगीताका रूपमा खडा भइन्। रुबीनाको आकर्षक व्यक्तित्वका कारण सबैको दिल जित्न सफल भएको कतिपयको भनाइ छ।
रुबीना दिलाइक र राहुल वैद्यबीच जसरी कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, यसलाई हेर्दा अहिले नै विजेता छुट्याउन हतार नगर्दा राम्रो जस्तो देखिन्छ। सबैकुरा फिनालेको लाइभ भोटिङमा निर्भर पर्छ। लाइभ भोटिङमा जसको बढी भोट आउँछ, उसैलाई विजेता घोषणा गरिन्छ। अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा र फ्यान फलोइङलाई मापन गर्दा राहुलको सम्भावना अलि बढी देखिन्छ। बिजेता जो होस्, उसले बिग बोस १४ को ट्रफीसँगै ५० लाख नगद पुरस्कार पाउनेछन्। यस पुरस्कारमा कर काटेर विजेताले ४५ लाख भारू पाउनेछन्।
(आइचौकमा प्रकाशित लेखबाट अनुदित)
शाहरुख खान अर्थात् 'किङ अफ रोमान्स' तर यस पटक कोरोना कहरका कारण त्यो सम्भव थिएन। उनले भर्चुअल माध्यमबाट त्यो काम गरेका छन्। ‘फौजी’ र ‘सर्कस’बाट करिअरको सुरुवात गरेका शा... मंगलबार, कात्तिक १८, २०७७
बलिउडमाथि अचानक हमला बढ्नुको रहस्य के? त्यो समय कति मान्छेले यस फिल्मलाई कम्युनिस्ट एजेन्डा अघि बढाउने फिल्मका नजरियाबाट हेरे। तर ल्याङलाई थाहा थियो कि यसमा एक नाजी समर्थक... बिहीबार, असोज २२, २०७७